Photo Source : Franchie India
म:म: प्राय: सबै नेपालीको मनपर्ने खाजा हो। ‘नेपालीहरूले रेस्टुरेन्टमा गएर मेनु हेरे पनि अन्त्यमा कि म:म: कि चाउमिन नै अर्डर गर्छन्’ भनेर ठट्टा गरिएको त्यसै हैन। कतिले त ‘अन्य धेरै परिकार अर्डर गरेपछि म:म: नमगाएमा केही अपुरो भएको जस्तो महसुस हुन्छ’ समेत भन्ने गरेको सुनिन्छ। म:म:को यो क्रेजलाई केही नेपाली व्यवसायीहरूलाई ब्राण्डको रुपमा बिस्तार गरेर मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन्। सुनौँ तीनका सफलताको कथा।
बोताका सञ्चालक निभेन अमात्य हुन्। उनी इन्टरनेशनल बिजनेसमा लन्डनबाट डिग्री लिएर काठमाडौँ आएका थिए। यहाँ आएर व्यवसाय गर्न मन थियो। सुरूमा बेरी एण्ड डेरी नाम राखेर एउटा क्याफे सुरु गरे। तर बच्चा देखि बुढासम्म सबैमा म:म: प्रतिको लगाव भेटेपछि अर्को बिजनेस सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। एकैपल्ट अर्कोतिर हाम्फालिहाल्नु पनि राम्रो हुँदैन सोचेर आफ्नै क्याफेमा म:म: बनाएर परीक्षण गरे। त्यसले धेरैलाई लोभ्यायो। उनलाई अन्य रेसिपि खोज्ने पनि बनायो। त्यसपछि आफ्नो क्याफे र रेस्टुरेन्टमा खाना सप्लाइ गर्न भनी सेन्ट्रल किचेन खोले। कुमारीपाटीमा रेस्टुरेन्ट खोल्न मिल्ने ठाउँ भेटेपछि भने बोता ब्राण्ड सुरू भयो।
बोताबाट उनले स्टिम, फ्राई, ओपन, खुवा, टिक्का, छोइला, फ्रोजन र अरू थुप्रै प्रकारका म:म: बेच्न थाले। विस्तारै बिहान, दिउँसो र बेलुकाको नास्ता र खाना पनि राखे। ग्राहकहरूमा त्यसको स्वाद चर्चित भयो। ग्राहकहरुको थुप्रै सुझाव पनि आउन थाले। यसका शाखाहरू अरु ठाउँमा पनि भइदिए वा आफ्नो घर नजिक आइदिए झनै सजिलो हुने थियो भन्ने सबैको आशय हुन्थ्यो। ग्राहकको कुरा मनन् गर्दै उनले अरू ठाउँमा पनि बोताको शाखा खोल्ने निर्णय लिए। सुरुवात अनामनगर र कमलपोखरीबाट भयो। अहिले झोछें, चक्रपथ, कौशलटार, कालिमाटी र पुल्चोक सम्म पनि फैलिइसकेको छ।
सँगै बि.बि.ए. पढेका सौरभ शाह, सुभेक्छ्या हाडा र पारस श्रेष्ठ, यी तीनै जना म:म:का पारखी हुन्। मनपर्ने खानाको पारखी भएकाले नै उनीहरूले म:म: केन्द्रित रेस्टुरेन्ट खोल्ने सोचे। सिन्का खोल्ने भनेर योजना बनाउँदा पढाइ सकिएकै थिएन। सकिनासाथ आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्ट सुरु गर्न लागिहाले।
कामको सुरुवात सर्भेक्षणबाट भयो। ‘कसलाई के खान मनपर्छ र कतिसम्म खर्च गर्न चाहन्छन्?’ यसबारे धेरैलाई सोधे। म:म: भन्नेहरू धेरै भेटिए। काम गर्न थप हौसला मिल्यो। अनि आउटलेट सुरु गर्न तयार भए। कमी थियो ठाउँको जुन भेट्न निकै गाह्रो पर्यो। साढे ६ महिना ठाउँ खोज्न मै बित्यो अनि मात्र कुमारीपाटीमा नयाँ सटर भेटे। खोलेकै दिन ग्राहकको ओइरो लाग्यो। खोलेको ३ घण्टा पछि सबै खाना सकियो र रेस्टुरेन्ट बन्द गर्नुपर्ने भयो। स्टाफको पनि कमी थियो। ग्राहक धान्न नसकिने स्थिति देखिएपछि पर्याप्त स्टाफ नभेटिन्जेलसम्म रेस्टुरेन्ट खोलेनन्। सबै तयारीका साथ फेरी खोलेपछि छोटो समयमा नै सिन्का निकै चर्चित हुन पुग्यो।
उनीहरूले सिन्कामार्फत म:म:लाई फरक तरिकाले कसरी बेच्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएका छन्। त्यसैले अकबरे, छोइला, टिक्का, विङ्स, चाट, सुकुटी, तन्दुरी र अरू थुप्रै प्रकारका म:म: बेच्दै आएका छन्। अहिले सिन्काको शाखा नयाँ बानेश्वर र दरबारमार्गमा पनि खुलेको छ। सिन्काले छोटो समयमा नै निकै ग्राहक बनाउन सफल भएको मान्नुपर्छ। ३० देखि ४० किलोमिटर टाढाबाट पनि ग्राहकहरू सिन्का आउने गर्छन्। खाने ठाउँ नपुगे बाहिर एक घण्टासम्म पर्खेर खान बसेका ग्राहकहरू पनि छन्। तर ग्राहक बनिसके भन्दैमा ढुक्क हुन सकिदैन। सिन्काको टिमले यो कुरालाई ध्यान दिएर सधैँ उत्तिकै मेहेनत गरिरहेको देख्न सकिन्छ।
म:म: स्टेसन रेसम लामाले सुरु गरेका हुन्। उनी पढाइको सिलसिलामा बेलायत गएका थिए। उता बसेर खाना र पेय पदार्थको क्षेत्रमा ३४ वर्षे लामो अनुभव हाँसिल गरे। लामो समय विदेश बसिसकेपछि नेपालमा नै केही गर्छु भन्ने जाँगर चल्यो। तर फर्केर के गर्ने भन्ने कुरामा भने राम्रो ज्ञान थिएन। सुरुमा सल्लाह लिए। आफ्ना साथीभाइ र आफन्तलाई कुन व्यवसाय गर्दा राम्रो होला भनी सोधे। नेपालमा सबैभन्दा मनपराइने र धेरै खाइने खानाको बारेमा खोजी गरे। म:म: सबै उमेर समूहकाले खाने रहेछन् भन्ने पत्ता लाग्यो। त्यसपछि उनले म:म: चेन खोल्ने निर्णय गरेका हुन्।
किर्तिपूरमा रहेको म:म: स्टेसनले धेरै किसिमका म:म: बेच्दै आएको छ। साँधेको, चिल्ली, सेकुवा, ग्रिल, छोइला, झोल, क्रिस्पी, फ्राइड, स्टिम आदि विभिन्न प्रकारका म:म: यहाँ पाइन्छ। म:म: सँगै ३ थरिका सस पनि सर्भ गरिन्छ। गुन्द्रुक, सिजनल तरकारी, आँप, नरिवल लगायत अरू थुप्रै ससहरू पनि राखिएका छन्। म:म: स्टेसनले पनि छोटो समयमा धेरै ग्राहकहरूको मन जित्न सफल भएको छ।
माथि उल्लेख गरिएका रेस्टुरेन्ट बाहेक एभरेष्ट, सानदार, स्वादिष्ट, बंगलामुखी आदि रेस्टुरेन्ट पनि म:म:का लागि निकै चर्चित छन्।
स्रोत: यो लेख इन्टरनेटका विभिन्न सामाग्रीहरू अध्ययन गरि तयार पारिएको हो।
यी हुन् सानो उमेरमा नै अरबपति बनेका व्यवसायीहरू!
नेपाली समाजमा सानो उमेरमा नै आफ्नो व्यवसाय...
व्यवसायी बन्न चाहनेहरूले हेर्नै पर्ने ५ फिल्महरू
व्यावसायिक जीवनमा प्राय: सोचेजस्तो नहुन सक्छ। यस्तो ...
व्यवसायीहरूले पढ्नै पर्ने ५ आत्मकथा
विश्व कै धनी व्यक्ति बिल गेट्स वर्षमा...
धनकुटाका लोकेश भण्डारी र धादिङका उमेश शाह...